चीनमा कलेजको प्रवेश परीक्षामा एक करोड सहभागी ! – Nepali Digital Newspaper
चीनमा कलेजको प्रवेश परीक्षामा एक करोड सहभागी !
घटना र विचार, न्युज डेस्क ii 12 months ago June 7, 2019
चीनमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने करिब एक करोड विद्यार्थी शुक्रबार प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका छन् ।
चीनमा एकैसाथ हुने यो परीक्षा दुई दिन चल्नेछ । चीनको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार केही प्रान्तीय इलाकामा भने यो परीक्षा आइतबारसम्म पनि हुनेछ ।
प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन चाहने विद्यार्थीको यो संख्या सन् २०१० यताकै उच्च हो । चिनियाँ शिक्षासम्बन्धी जानकारी दिने एक वेबसाइटले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने चिनियाँ विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
तर कति विद्यार्थीले पढाइको अवसर पाउँछन् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयले समेत स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।